Ingabe i-MBE knighthood? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Mbe knighthood - okubalwe imibuzo nezimpendulo
Mbe knighthood - okubalwe imibuzo nezimpendulo
Ingabe i-MBE knighthood?
Udumo lukaknighthoodKuvela ezikhathini zasendulo, njengoba kunjalo nangendlela esetshenzisiwe ukunikezela i-knighthood- ukuthinta kwenkemba yiNkosi noma iNdlovukazi. Kanye ne-CBE, abantu bangabuye banikezwe isikhulu (Kokubilinoma iLungu (MBE). I-CBE yi-Order ephakeme kakhulu yomklomelo woMbuso WaseBrithani, ilandelwaKokubilibeseMBE.
Abantu Abayi-10 Abaphezulu Abenqabe I-Knighthood UDavid Bowie Yize abaculi abaningi baseNgilandi abaziwayo abanjengoSir Mick Jagger noSir Paul McCartney bewamukele lo mklomelo, uDavid Bowie wenqaba ukuba nguswazi ngo-20013. Nokho waqokwa njengo-Commander des Ordre des Arts et des Lettres nguhulumeni waseFrance futhi uthole iziqu zobudokotela ezihloniphekile ezivela eBerklee College of Music, zombili ngo-1999.
Phakathi nesikhathi sokusebenza kwakhe, lo mculi uthengise amarekhodi alinganiselwa ezigidini ezingama-250 futhi wathola i-platinum engu-9, igolide elingu-11 nezingqimba zesiliva eziyi-8. UBuyie wenqabile nokuqokwa njengoMkhuzi Wombuso WaseBrithani eminyakeni emithathu eyedlule.1 Engxoxweni eyayingo-2003, lo mculi wachaza izinqumo zakhe ngokuthi, “Angikaze ngizimisele ukwamukela noma yini efana naleyo.
Angazi kahle ukuthi yenzelwe ini. Akukhona engikusebenzele impilo yami. ”Ngaleso sizathu, kubonakala sengathi uBowie ukhetha izindondo ezithile eziqhakambisa ithalente lakhe lobuciko ngokungafani neziqu ezijwayelekile ezinikezwa yiNdlovukazi u-Elizabeth II.
U-Albert Finney: Inkanyezi yaseBrithani kanye nomlingisi wefilimu u-Albert Finney mancane amathuba okuthi aphinde akhethwe ukuze ahlonishwe ngobukhosi ngemuva kokunqatshelwa ukwamukelwa kabili. Ngemuva kokuthola udumo ngendima ayidlalayo kuTom Jones (1963), athola iGolden Globe ye-Most Promising Newcomer, uFinney wajabulela impumelelo esikrinini. Ungumamukeli weGolden Globe, i-Emmy ne-Screen Actors Guild Awards futhi uqokwe amahlandla amane kwi-Academy Award.
Amafilimu akhe akamuva afaka u-Erin Brockovich (2000), Big Fish (2003) kanye neBourne Ultimatum (2007). Ngo-1980, uFinney wenqaba uMkhuzi we-Order of the British Empire, ekuqaleni owayephakathi kwezigaba ezinhlanu ze-oda lama-knights elasungulwa yiNkosi uGeorge V ngo-1917 ukuhlonipha ababengewona amasosha ngemuva kweMpi Yezwe I. Ngemuva kokulingisa ku-Erin Brockovich , wenqabe isikhundla esaziwa kakhulu kakhulu se-knight.
UFinney utshele abezindaba ngqo ukuthi wenqabile ngenxa 'yokubanjwa inkunzi'. U-Aldous Huxley Ngo-1959, umbhali odumile futhi owayengumthandi wezidakamizwa u-Aldous Huxley wenqaba ukunikezwa isikhundla esisezingeni eliphansi kunawo wonke we-knighthood, uBachelor Knight. UHuxley waziwa kakhulu ngeBrave New World yakhe (1932), ehlola umphakathi wesikhathi esizayo oguqulwe ubuchwepheshe bokuzala nokufunda ukulala.
ukuzivocavoca ekhaya kwemilenze
Ngokuhamba kwesikhathi wazama isandla sakhe ekubhalweni kwesikrini, kepha ukulingisa kwakhe u-Alice eWonderland kwenqatshwa nguWalt Disney ngoba 'wayeqonda kuphela igama ngalinye lesithathu.' Njengomgqugquzeli we-LSD, uHuxley waziwa ukuthi wafakwa ngemithamo emibili emikhulu ye-psychedelic lapho efa ngezimbangela zemvelo. Lesi sishoshovu somuntu kanye ne-pacifist naso sasinentshisekelo ekuqondeni okuyimfihlakalo nakokuphilayo.
UHuxley wayekhuthele kwezepolitiki, okungahle kuchaze ukwenqaba kwakhe udumo lobukhazikhazi. Ngemuva kokusebenza njengesisebenzi sasepulazini eminyakeni yakhe yokuqala yobudala, umbhali wakhuthaza imigomo yobusoshiyali. Ngemuva kokuthuthela eHollywood ngo-1937, wajoyina iVedanta Society of Southern California efundisa amakilasi okuzindla nawomoya wamaHindu.
UVanessa Redgrave Wamemezela 'umlingisi ophilayo omkhulu kunabo bonke besikhathi sethu' nguTennessee Williams no-Arthur Miller, uVanessa Redgrave wenqaba udumo ngo-1999. Ubaba wakhe, umlingisi uMichael Redgrave, wathatha isikhundla sokuba nguMkhuzi Wombuso WaseBrithani. Yize kungukuphela komlingisi waseBrithani njengeNdlovukazi yaseHollywood othole imiklomelo ka-Oscar, u-Emmy, uTony, iGolden Globe ne-Screen Actors Guild, uzohlala eyisakhamuzi soMbuso waseBrithani.
Waziwa kakhulu ngomsebenzi wakhe wasesteji kanye nendima yamafilimu kuMary, Queen of Scots (1971), Julia (1977) naseWowards End (1992). Inhlonipho yakhe enkulu ukuba yinxusa elihle le-Unicef. Noma ingaqondile ngqo, ukumela kwayo ukukhathazeka ngokweqile kwezepolitiki kuyazikhulumela.
Uzwakalise ukuzwelana kwakhe ne-IRA, i-PLO kanye nabahlukanisi baseChechen. Enkulumweni yakhe njengomlingisi osekela kakhulu ngo-1977, wahlasela “abakhohlisi abangamaZayoni” 6. UStephen Hawking Naphezu kokwamukelwa kwe-Honorary Fellowship evela eRoyal Society of Arts kanye neMedal of Presidential Medal of Freedom, isazi sefiziksi uStephen Hawking ukuvumile obala ukuwuthokozela lo mklomelo.
I-Hawking yaziwa kakhulu ngeminikelo yayo kwi-cosmology kanye ne-quantum gravity, ehlola i-big bang theory kanye nezimbobo ezimnyama. Umthengisi wakhe omkhulu we-1988, Umlando Omfushane Wesikhathi, wahlala ohlwini lweSunday Times oluthengisa kakhulu amasonto angama-237. Unesifo i-amyotrophic lateral sclerosis (ALS noma isifo sikaLou Gehrig), esicishe samkhubaza.
U-Hawking ngokuzwakalayo akasamukeli lesi sihloko, wathi ezingxoxweni wathi 'akawuthandi wonke umqondo'. Usosayensi futhi ugxeka ngokusobala 'ngokungaphathwa ngendlela' kwemali yesayensi nguhulumeni wase-UK. Ngokuyinhloko, uphikisana nokuhlanganiswa koMkhandlu Wokucwaninga Wezinhlayiyana Zomzimba kanye Nezinkanyezi noMkhandlu Welebhu Ephakathi Yomkhandlu Wokucwaninga, ukholwa ukuthi kufanele aqhubeke nezinhlangano ezihlukene ukuze kutholakale kahle.
U-EM Forster, umbhali odumile waseNgilandi, wenqaba udumo ngo-1949, kodwa wamukela i-Order of the Champions of Honor ngo-1953 kanye ne-Order of Merit ngo-1969, unyaka nje ngaphambi kokufa kwakhe eneminyaka engama-90. Zombili iziqu babona ukugqama emibhalweni kodwa babhekwa njengamalungelo amancane. Njengomphathi wokuphila isikhathi eside futhi owayengumsakazo we-BBC, waziwa kakhulu ngokubhala i-'A PassageTo India ',' Howards End 'kanye' neGumbi elinombono '.
Yize engazange abhale phansi ukuthi kungani enqabe lesi sicoco, kunokucatshangelwa ukuthi ubengafuni ukuheha abantu ngenxa yobungqingili bakhe obufihliwe. Eqinisweni, ubulili bukaForster buvezwe kuphela ngenkathi kushicilelwa u-'Maurice 'ngemuva nje kokushona kwakhe. Umbhali ucindezele le ndaba ethandekayo yamadoda amabili avakashele eCambridge iminyaka ecishe ibe ngu-60 ngenxa yokwesaba ukwenqatshwa umphakathi.
UGeorge Bernard Shaw: Ngenxa yokungathandi ukuhlonishwa ngokujwayelekile, uGeorge Bernard Shaw wenqabile ukunikezwa udumo. Ngenkathi esiza ekutholeni iLondon School of Economics futhi washicilela amapheshana amaningi wobusoshiyali eFabian Society yakhe ayithandayo, uShaw waziwa kakhulu ngemidlalo yakhe. Nguye kuphela osethole umklomelo kaNobel Wezincwadi, mhlawumbe owenzelwe “uSaint Joan” (1925) no-Oscar ngeminikelo yakhe yezincwadi kanye nomdlalo weshashalazi uPygmalion (1938).
Wamukele kuphela umklomelo kaNobel ngokuyalelwa ngumkakhe, owakubona kuyisibopho se-Ireland. Yize kunjalo, wenqaba umklomelo wemali futhi wacela ukuthi kusetshenziselwe ukusiza abahumushi besiSwidi bahumushele esiNgisini. Ngaphandle kokuzazisa kwakhe okukhulu, uShaw wenqabile ukunikezwa kobugqwetha nokunikezwa okungakahleleki kwe-Order of Merit kulandela lokho kwenqaba.
Umbhali wemidlalo uphawule kalukhuni ukuthi kuphela ukuhlolwa okubheka emuva kwendaba okuchaza ukufaneleka kombhali. Ubuntu bakhe obugqamile buveze nesichasiso esisha, esithi 'Shavian,' igama elisetshenziselwa ukuchaza imikhuba yakhe evame ukuba nolaka. UPaul Dirac: UPaul Dirac owayeneqiniso kakhulu wayenezizathu ezahlukahlukene zomuntu zokuthi angashiswa kabili.
Uthathwa njengomunye wesazi sezemvelo esikhulu kunazo zonke emhlabeni futhi ungumnqobi omncane kunabo bonke weNobel Peace Prize ozoklonyeliswa ngo-1933 eneminyaka engama-31. Wathola lokhu kuhlonishwa kanye no-Erwin Schrödinger ngomsebenzi wakhe we-athomu. Wabikezela ukuba khona kwe-antimatter futhi waqamba isibalo esilinganayo se-Dirac, esichaza ukunyakaza kwezinhlayiyana ze-fermion.
UDirac wenqabe udumo lobukhazikhazi, ikakhulukazi ngoba wayengafuni ukubizwa ngegama lakhe unomphela (okungabika ukwamukelwa kwakhe ngo-1973). yokufaneleka ngaphandle kwesidingo esinjalo). Kodwa-ke, wayaziwa futhi ngokugwema ukunakwa, imvamisa efihla ukuvimba ukunakwa kwabezindaba.
Kungenzeka ukuthi waye-autistic, ehlukunyezwa ngokomqondo ngubaba wakhe oqhoshayo, futhi wakhetha ukuthula phakathi kwabanye. U-Albert Einstein wake waphawula ngo-Dirac, 'Lokhu kulinganisela endleleni exakayo phakathi kobuhlakani nobuhlanya kuyesabeka.' Ekugcineni waphuma egobolondweni lakhe ngemuva komshado wakhe futhi unkosikazi wakhe omusha wakhulisa ukuthanda kwakhe okuvamile noMickey Mouse noCher. 2.
Indlovukazi uVictoria Victoria yahlomulisa uMichael Faraday ngokufeza impilo yakhe yonke ezifundweni zakhe esebenzisa iHampton Court House kanye ne knighthood. Wamukele kuphela eyokuqala. Yize engenakho ukuqeqeshwa okusemthethweni1, usosayensi waseBrithani kanye nomakhemikhali waziwa kakhulu ngamagalelo akhe ku-electromagnetism.
Imishini yakhe kagesi ejikelezayo yavula indlela yokuba ugesi ube ngumthombo wamandla osebenzayo kubuchwepheshe. I-farad, iyunithi ye-capacitance elinganisa amandla we-capacitor wokugcina amandla emkhakheni kagesi, ibizwa ngegama lakhe. 'Kungenzeka ukuthi izinkolelo zakhe zadlala indima kulokhu kulahlwa - wayeyingxenye yamaSandemania manje asebengasekho, iqembu eliqinile lasePresbyterian elalilahla ukuqashelwa emhlabeni.
Impela, uFaraday wayekhathazekile ngokuthi kufanele aye esidlweni sakusihlwa neNdlovukazi kuphela. Wavuma ukwenza imisebenzi yomphakathi futhi waxoshwa esontweni lakhe waze waphenduka futhi wathola ukubuyisana okukhulu. UL.
S. Lowry: Umdwebi othobekile kodwa onekhono ngokweqile uL.
U-Lowry wenqabe izindondo zobukhosi eziningi ukwedlula noma yimuphi omunye umuntu owaziwayo - abahlanu sebebonke. Le ndoda elula eyazibiza ngokuthanda yakhetha ulwanga oluncane ukukhombisa izigcawu eziningi zedolobha elikhulu, zisebenzisa abamhlophe kuphela, izindlovu zendlovu, abamnyama, ocher ophuzi nohlaza okwesibhakabhaka lwasePrussia. Ngesikhathi seMpi Yesibili Yomhlaba wenziwa umdwebi wasebukhosini osemthethweni futhi waqokwa ngo-1953 ukupenda ukugcotshwa kukaNdlovukazi u-Elizabeth II.
ULowry usebenze njengomqoqi wokuqasha iPall Mall Property Company eManchester iminyaka engaphezu kwamashumi amane. Lokhu kukhathazeka kwakudinga ukuthi ahambe azungeze idolobha abuke impilo yasemgwaqeni, ayikhombisa kamuva ngendwangu kusihlwa kusihlwa. Kucatshangelwa ukuthi uLowry wenqabe ukwamukelwa kwasebukhosini ngokungafuni ukunakwa ngumphakathi futhi wahlukaniswa njengomculi wokuzilibazisa.
Umdwebi wenqaba ubuhlakani nokuqokwa njengoMkhuzi We-oda LoMbuso WaseBrithani kanye noMphathi Womyalelo Ohlonipheke Kakhulu Wombuso WaseBrithani.
Ngabe i-MBE ikuvumela ini?
AnMBEunikezwa ngokufeza okuhle noma ukusebenzela umphakathi. Lokhu kuzoba nomthelela wesikhathi eside, obalulekile futhi ugqame njengesibonelo kwabanye. Ukuhlonishwa koNyaka Omusha ngokwawo kusuka ku-1890.
Sanibonani nonke, namukelekile ekufundeni okungenazandla kwe-MBE okuvela eBrainscape le mibuzo esalindile ihlobene nemiqondo yamakhontrakthi wesivumelwano ake siqale Umbuzo 1 Yiziphi izinhlobo ezintathu zomonakalo ukulahlekelwa okulindelekile ekulahlekelweni kokuthembeka nombuzo wokubuyiselwa kwemali o-3 ukuchaza ukulahleka okulindelekile abazuzi iqembu elingaphuli umthetho kuze kube lizobeka esimweni ebesizoba kulo ukube inkontileka ibigcwaliswe ngokuphelele Umbuzo 3 Uwubala kanjani umonakalo olindelekile Umonakalo olindelekile uhambelana nokulahleka kwenani le iqembu elingaphuli umthetho kanye nokulimala okuvelayo futhi okulandelanayo - izinkokhelo ezitholakele kanye nezinzuzo kanye nanoma yiziphi izindleko ezonga ngenxa yokwephula Umbuzo 4 kungalindelwa ukulimala ngokuqagela cha kumele zenziwe zibalwe ngokuqiniseka okwanele Umbuzo 5 ingabe inkantolo inganikeza umonakalo ngokulahleka kwenzuzo elahlekile inzuzo, ikakhulukazi esimweni se-S. Startups namabhizinisi amasha athanda ukuba nzima ukufakazela ngakho-ke izinkantolo ziba kabusha kakhulu ukungathandi ukunikela ngalezi zinhlobo zomonakalo, ungafuna ukulimala kokwethembeka esikhundleni salokho, kepha ngenxa yokuthi ziyanqikaza akusho ukuthi izinkantolo ngeke zikhiphe umonakalo wenzuzo elahlekile, futhi zenza lokhu lapho umuntu olimele efaka isicelo sesinxephezelo ukuqagela nje ukuthi kungakanani abebengakwenza kulungile ake sithathe ikhefu elifushane lokufunda ukukukhumbuza ukuthi uphefumule ngokujulile esiswini sakho, ungagwinyi isifuba sakho I-oxygen eningi ongayithatha ngokuphefumula ngakunye, isitoreji sememori esingcono ozoba naso Ngombuzo eziyisithupha ungafaka isicelo sesinxephezelo ngezinsizakalo ezingaphelele Yebo Ungathola isinxephezelo ngomsebenzi owenziwe nokulindelwe isinxephezelo ngomsebenzi ongakenziwa Umbuzo wesikhombisa ubhale izimo ezine lapho alimaze khona iqembu lingakwazi ukubuyisa ngokuphelele ukulahlekelwa okulindelekile uma izindleko zokwenza inani lemakethe lesevisi enjalo ezimbili, uma iqembu lingabali ukulahlekelwa okulindelwe ngokuqiniseka okwanele kathathu, uma umonakalo ungalindelekile i-balandin ji i-zz ibizoncishiswa noma kungagwenywa ngokufanelekile Umbuzo wesishiyagalombili umthengi wezimpahla ngokusho kwe-UZK unelungelo lokuthi yiziphi izinhlobo zezimangalo zomonakalo ezintathu ezenzakalisiwe ezilandelwayo futhi kwaqedwa Umbuzo wesishiyagalolunye yimuphi umonakalo owehlekayo womthengi wezimpahla omonakalo owenzekile? Umthengi wezimpahla yizindleko ezihambisana nokulawulwa kokulimala nokulimaza, kufaka phakathi izindleko zokugcina izinto zokuhamba, njll. Umbuzo 10 Uwubala kanjani umonakalo wokwakhiwa okuyiphutha uma iphutha lisebenza esivumelwaneni, okusho ukuthi lidinga ukulungiswa, bese usebenzisa inani ngenxa Ukulungisa isinambuzane liyadingeka ukubala umonakalo futhi lokho kungukuphela kwemijikelezo yakho eyishumi yokufunda i-flashcard ukuze uzuze amandla aphelele.
Khumbula ukufunda i-inbrainscape ukupheka, ukudlala imidlalo, noma kungenjalo ungakwazi ukuzulazula kuhlelo lokusebenza. Lalela lonke lolu hlu lwadlalwayo olungenazandla, noma ngabe ufunda siphi isifundo noma iyiphi indlela, itbrainscape izokusiza ukuhlangabezana nenselelo yakho
Kusho ukuthini i-MBE?
Imele iLungu le-Oda Elihle Kakhulu LoMbuso WaseBrithani, iMBEngumklomelo wesithathu ophakeme kunayo yonke we-British Empire award (ngaphandle kwe-knighthood / damehood), ngemuva kwe-CBE bese kuba yi-OBE.17 2021.
Hheyi bafana, u-Eric Coffie lapha ku- scorecontracts.com. Futhi le ndatshana namuhla iyimpendulo yomunye wababhalisile be-YouTube.
Ungithumelele ukuphawula ethi, 'Hheyi, ngibheke izindatshana zakho' futhi ulokhu ukhuluma ngezinhlelo eziyi-8 (a) nezithombe, 'Kungani ungakhulumi nge-DBE, NBE' nezinye izinhlelo zasendaweni nezikahulumeni ? 'Ngakho-ke namhlanje ngenze lo mbhalo ngiphendula lowo mbuzo, lokhu kuphawula. (umculo omnandi) Kulungile, ngakho-ke namhlanje sikhuluma nge-DBE vs MBE vs Federal Contracts. Ngokubona kwami, izivumelwano zikahulumeni zivuthela ezinye izinhlelo ezimbili emanzini.
Ngakho-ke ngizoqhubeka, vele ungene ngqo. Ngakho-ke uma Ngakho uma ubheka i-MBE, i-DBE, nohulumeni wesifundazwe, into yokuqala imayelana noxhaso lohlelo. Njengoba i-EBE isekela omasipala nabasekhaya, sikhuluma ngamadolobha akho asendaweni.
Futhi ngezikhathi ezithile banenkinga yokukhokha abantu. Ngingakhuluma ngokuhlangenwe nakho lapho, khona manje, namuhla, kulungile 2017, kunguJuni 3, 2017, futhi nginabangane bami abalwela ukukhokhelwa yiMiami - Dade County, bawenza umsebenzi, basebenzisa imali belinde imali yabo, futhi asikhulumi ngeviki noma amasonto amabili, sikhuluma ngenyanga, izinyanga ezimbili, futhi njengamanje abanamali, nganoma yisiphi isikhathi maduzane, ukukhokha laba bantu. Ngakho-ke siyaxwayiswa ukuthi singenzi noma yimuphi umsebenzi lapha esizeni, esifundeni, futhi lezi futhi yizinhlobo ezikhethekile zamaphrojekthi ngoba asikwazi ukukhokhelwa, futhi lokho kunamuhla, futhi isimo se-DBE, lelo yizinga lombuso, mhlawumbe hhayi lokho kungenzeka ube nalezi zinkinga, kepha khumbula lapho imakethe yaphahlazeka futhi zonke izifundazwe zinezinkinga ngemali kanti ezinye zezifundazwe zazicabanga ngisho nokuqothuka.
Abantu ababesezimeni lapho izinkontileka kwakufanele kusetshenzwe ngabo babesengozini yokungakhokhelwa noma ukunxeshezelwa. Ezinhlanganweni zikahulumeni, bafundile kulokhu okwedlule, ngakho-ke bakha inqubomgomo yokungavumelani nenkampani ngaphandle kokuthi imali isivele ikhona, ngakho-ke lapho uthola umsebenzi, uthola umsebenzi enkundleni yezwe, futhi ungaba isiqiniseko sokuthi imali isivele ikhona; inombolo yesibili; inkontileka enkulu noma ingqondo. Futhi ezingeni le-MBE lendawo, engikubonile ukuthi abanaki futhi abacabangi.
Futhi sikhuluma ngosonkontileka abaphambili. Uma kwenzeka uthola inkontileka yakho, uzobe ukuphi? ubukhulu, lokho kuyamangalisa. Kepha ingxenye enkulu, sikhuluma ngebhizinisi elincane nelincane, futhi sikhuluma ngalezo zinhloso zamaphesenti uNdunankulu okufanele akunikeze isivumelwano ngazo.
Kuhle engikubonile ukuthi, angikaze ngibone usonkontileka oyinhloko efakwa ohlwini lwabamnyama. Noma ngabe ungakhokhi noma uphikisana ngemali ethile, uyazi ukuthi ungabalimaza kanjani abafana abancane. Angikaze ngibone noma ngubani ovinjelwe ngaphambilini.
Ngakho-ke abanobudlabha. Awucabangeli. Awanawo amaphoyisa akhethekile alawula ukuthi kufanele enze kanjani futhi aphathe kanjani ibhizinisi, ikakhulukazi amabhizinisi amancane.
Futhi ezingeni le-DBE, ngibabonile benaka kakhulu, akunjalo, ngoba lezo zinhlobo zezinkampani eziwina imiklomelo ephezulu yezinga le-DBE nelezwe zivame ukuba yizinkampani ezinkulu ngoba sikhuluma ngezinkontileka zezindiza futhi sikhuluma ngomgwaqo izinkontileka nokunye okunjalo kukhuluma nezinkampani ezinkulu. Bajwayele ukukhumbula ngokwengeziwe futhi bazi, kepha ngasikhathi sinye basengakungqongqoza bangakukhokhi. Ezingeni likahulumeni, kokuhlangenwe nakho kwami, ngitholile, futhi futhi: Bengisebenza njengonkontileka ongaphansi, izinkontileka zikahulumeni iminyaka emihlanu noma eyisikhombisa.
Ngibonile ukuthi bakuphi empeleni, kunalokho, abafuni ukulahlekelwa yizinkontileka zabo zesinkwa nebhotela, bafuna ukuyekethisa lokho ngokubika inkontileka encane enkampanini ukuthi lo muntu akakakhokhelwa. Kulungile, babuyile, kunemithetho nezinto ezisendaweni, futhi empeleni ziyaphoqelelwa futhi ziyalandelwa. Ngakho-ke lokhu kuzoba yisibonakaliso ngokumelene noNdunankulu kanye nenkontileka yabo elandelayo yokungazenzeli.
Angizukusho ukuthi akwenzeki, kepha bacabangele kakhulu ukwedlula abasezingeni le-MBE ne-DBE. Futhi, ake ngikutshele, uma usebenza lapha ngaphandle, futhi uyasebenza, uyazi, uma wenza umsebenzi wakho, ufuna ukukhokhelwa. Kulungile kuphela, akunjalo? Inombolo yesithathu, amasango.
Ngakho-ke uma siphinda sibheka lawo futhi, sonke sikhuluma ngamabhizinisi amancane lapha, uma sibheka imigomo yamabhizinisi amancane, imvamisa emazingeni ombuso nawasendaweni, cishe acishe abe yizigidi ezinhlanu noma ngaphansi. Uma ushaya inkundla yombuso, useseyibhizinisi elincane uma usukhiqiza, kufika kubantu abayi-10,000; i k imele izinkulungwane. Ngakho-ke sikhuluma nabasebenzi abayi-10 000, usathathwa njengebhizinisi elincane.
Futhi uma ukwakhiwa, uma wenza umsebenzi wokwakha ojwayelekile, kuze kufike ku- $ 33 nohhafu wezigidi, usabhekwa njengebhizinisi elincane, noma ngabe uyisitolo esikhethekile, ngicabanga ukuthi umkhawulo usondele ku- $ 16-18 million Ngokwesilinganiso seminyaka emithathu, kwesokudla, ukuze ubhekwe njengebhizinisi elincane lilodwa, ukhuluma cishe izikhathi eziphindwe kayishumi lapho kungenzeka ukuthi ibhizinisi lakho likhule ngaphambi kokuba ungene enkampanini ephakathi nendawo enkulu. Inombolo yesine ibaluleke kakhulu kimi ngoba ini? Ngithole kokuhlangenwe nakho kwami ​​ukuthi yonke inkampani idala umuntu noma ababili, uyazi, mhlawumbe wena nomkakho noma wena nelungu lomndeni; Omunye wenza ihhovisi namaphepha, bese uzama ukuthola izinkontileka futhi uzenze ngempela. Ngakho-ke ngikuthola kumangaza ukuthi ezingeni lendawo izinkampani ezimbili ezizama ukusebenzisana zibiza lokhu kuhlangana.
Empeleni, imiphakathi eminingi inokuthile okubizwa ngokuthi i-afidavithi engeyona eyokuhlanganisa ongayisayina ethi ngeke usebenze nezinye izinkampani ukufeza lo msebenzi, engikuthola kumangaza kakhulu. Manje ngiyazi ukuthi kuzoba nabantu engizobathola abagxeki kanye nempendulo bethi, 'Cha, lokho akulona iqiniso ngempela, ngoba sikhuluma' ngabantu ababhide ndawonye emsebenzini. 'Kodwa-ke noma ngabe ufuna ukuyisonta, i-afidavithi engekho yokusebenzisana ayiwaxhasi amaqembu.
Futhi kuyafana nge-DBE, lapho bengasho khona ukuthi akukhona ukuhlangana, kepha akusekelwa. Umuntu okuqasha ukwenza lo msebenzi ulindele inkampani yakho ethile, futhi abasebenzi bakho bayayikhipha emsebenzini. Futhi lokho akuhlali kungenxa yokuthi, amanye ala maphrojekthi ahlukahlukene futhi ahlukahlukene kakhulu ukuthi inkampani ayikwazi ukwenza lo msebenzi.
Noma ubheka lezo zinkontileka ezinkulu zamasosha, kwesokudla ukwakha izindiza nemicibisholo, uBoeing noLokheed Martin, bayabambana ndawonye. Futhi ezinye zalezi zinkampani eziyizigidigidi zamadola zisebenza ngokubambisana ukwenza eminye yale misebenzi ebalulekile kuhulumeni wethu wase-US. Ngakho-ke angiqondi ukuthi kungani izinga lendawo kanye nezinga lombuso kungakakwamukeli ukucabanga kukahulumeni wesifundazwe lapho ukusebenzisana kukahulumeni wesifundazwe nomncintiswano wakho kuyinto ejwayelekile.
Eqinisweni, iCorps of Engineers kanye noMnyango Wezokuvikela banezinhlelo ezihlelekile zokuhlangana lapho ungahlangana nabancintisana nabo ukuqedela umsebenzi ngoba bayaqonda ukuthi lezi ezinye izinhlangano noma izinkampani akuzona ingxenye ebaluleke kakhulu ukufeza umsebenzi . Kimina, inombolo yesine yinto ebucayi. Dlulela kwezine ezilandelayo.
Inombolo yesihlanu, imithetho yenkontileka. Lapha eMiami-Dade C unty, sinamasonto angaphezu kwama-30. Ngakho-ke sikhuluma ngedolobha, iMiami, elinamarishi angaphezu kwama-30.
Kusho ukuthini lokho? Lokhu kusho ukuthi wonke amadolobha oya kuwo anezinqubo ezihlukile ezihleliwe, ayikho ifomethi emisiwe. Ngakho-ke udinga ukufunda futhi wamukele amasethi wemithetho engama-30 kanye nokuzibandakanya okuhlukile lapho usebenza. Akunandaba ukuthi uthengisani, noma ngabe uthengisa amahembe noma uthengisa igilosa noma uthengisa ubucwebe.
Kufanele ufunde ukuthi ungathengisa kanjani kuleli bhizinisi. Kuhluke ngokuphelele. Kuyafana ne-DBE, kusezingeni likahulumeni nje, akunjalo? Ngakho-ke uhlelo lwe-DBE luhlelo lwe-DBE, kepha indlela izwe ngalinye eliklomelisa ngayo izinkontileka zalo ihluke ngokuphelele.
Futhi futhi sonke singena esimweni lapho ungathola khona ukuthi kukhona ukungahambisani nendlela owenza ngayo okuthile uqhathanisa nendlela owenza ngayo, futhi ufuna ukubuyela emithethweni ukuze uthole ukuthi ngubani oqinisile, ri no yenza isinqumo. Futhi, uma ufunda ukuthi yimiphi imithetho ezolawula okuthile, ake sithi iPinecrest, eFlorida, bese uthuthela eHialeah, eFlorida, kunemithetho emibili ehlukene. Enkundleni yezinhlangano, akwenzeki.
Inkundla yenhlangano ihlanganisa yonke i-United States. Sikhuluma ngawo wonke amazwe ase-United States. Kepha iningi, ngaphezu kwamaphesenti angama-90 azo zonke iziphathimandla, lisebenza ngokuya ngemithetho ebizwa nge-FAR.
Kwezinye izinhlaka ezingasebenzi ngaphansi kwe-FAR, zisebenza ngokwalokho okubizwa nge-DFARS. Ngakho-ke uneqoqo lemithetho lazo zonke izinhlangano, kuzo zonke izifundazwe, noma ngabe uyaphi. Inombolo yesithupha, ukukhethwa komthombo.
Futhi leyo yinto engingakwazi ukugoqa ikhanda lami futhi, kepha angiyishayi imithetho, ngikutshela nje ukuthi kungani ngicabanga ukuthi uhulumeni wobumbano kanye nendlela abasayina ngayo yiyona kuphela indlela engiyincomayo kubantu. Ezingeni lasendaweni, basahamba nomthengi ophansi. Into efanayo nge-DBE, bahamba nomthengi ophansi.
Futhi uzothola kaninginingi ukuthi noma bazi ukuthi usonkontileka akakwazi ukwenza, bazohamba nabo noma kanjani ngoba leyo yinqubomgomo yabo. Abantu abayisebenzisi kahle ingqondo ukwenza isinqumo ngokuthi uyazi ukuthi yini le nsizwa engayinaki into esenkontilekeni, kepha kusamele simqashe ngoba leyo yinqubomgomo yethu. Ngibonile ezinye zalezi zinguquko lapho zikhona ngempela, uma kukhona okuthile okuphawulekayo, bathi ama-30 noma ama-40 amaphesenti ahlukile, bazobiza usonkontileka noma umbhida bese ebacela ukuthi baphinde bacubungule amabhidi abo futhi baqiniseke ukuthi angakuthethelela.
Isikhathi esiningi basahamba nomthengi ophansi. Ezinkundleni zombuso, bahamba nalowo obizwa ngebhidi ngokuphendula okuphansi kakhulu, okunengqondo kakhudlwana, akunjalo? Ngakho-ke uhulumeni wesifundazwe ukhathele ukusha, ukhathele yizo zonke lezi zinkampani ezindizayo ezithembisa kakhulu, ukuletha okuncane futhi empeleni kufaka uhulumeni enkingeni, uyazi? , banemisebenzi edinga ukwenziwa namuhla. Awukwazi ukufaka umfana, uJoker, esivumelwaneni bese uthola ekugcineni kosuku ukuthi akakwazanga ukugcina izithembiso zakhe.
Ngakho-ke ungakhipha noma ngubani obekwe njengongaphenduli, kwesokudla, bese udlulela kumbhida olandelayo ophansi. Futhi asikhulumi ngomfana noma ababili. Ngiqonde ukuthi, uma ungeke ukwazi ukufakazela ukuthi unekhono lokwenza umsebenzi, bazokhipha wonke umuntu ngaphandle baze bathole umuntu okwazi, futhi uma kungenjalo, bhala wonke umsebenzi bese uqala ngaphambili.
Inombolo yesikhombisa, amandla okukhula. Buyela kuleyo mibundu yebhizinisi lakho elincane, i-MBE ivumela, kanye ne-DBE, ukufinyelela enhlosweni yakho. Ngakho-ke uma kuyizigidi ezinhlanu lapho ngiqonde ukuthi empeleni ubamba amadola ayizigidi ezinhlanu.
Akunamkhawulo e-Federal Arena. Ukhuluma ngayo ikakhulu, ebusweni, icishe ibe ukwanda okuphindwe kasishiyagalombili kusuka ezigidini ezinhlanu kuya ezigidini ezingamashumi amathathu nantathu nohhafu. Kumane nje kukha phezulu.
Kepha ngaphezu kwalokho, uyazi, uma usuphothulile futhi wenza, uthi, izigidi ezingama-33 nohhafu ngokwesilinganiso ngaphezulu kwewindi leminyaka emithathu, Manje usungangena esigabeni esiphakathi bese uthola uhulumeni ngoba bona, uyazi, cishe oyedwa Unebhizinisi lama-trillion, kusenezinkulungwane zamashumi nezivumelwano ezingamashumi ezinkulungwane namathuba okungena. Empeleni, amandla okukhula enkundleni yenhlangano ayinamkhawulo. Okokugcina, uhlangothi lokuthuthukiswa kwebhizinisi.
Ngakho-ke kwaMBE banezinhlelo lapho uziqeqesha khona futhi banamakilasi amancane nemihlangano yokufundisana nezinto ezinjalo. Okufanayo kuya ku-DBE, kepha okuqhubeka ukukuthola lapho ubheka izincwadi futhi ubheka wonke lamadolobha aseMelika, kunjalo, wonke amadolobha ase-US awakahlangabezani nezinhloso zawo zamaphesenti zalokho akwenzayo ngokuya ukusiza amabhizinisi amancane, maqondana nokusiza abancane nabesifazane namanye amaqembu okuhlukaniswa. Lezi zinhlelo azisebenzi futhi kungenxa yokuthi awekho amazinyo angempela ngemuva kwazo.
E-arena yenhlangano, kunezinhlelo ezisemthethweni zokuthuthukiswa kwamabhizinisi. Kunezinhlaka lapha ngaphandle ezinezinhlelo ezenzelwe ukusebenzisana nokusiza amabhizinisi amancane engiqonde ukuthi, 8 (a) ibhizinisi, ngiyazi ukuthi ngikhuluma ngalo kakhulu, kepha kulolu hlelo lwe-8 (a) lwebhizinisi unikezwe umuntu unesibopho sempumelelo yakho. Futhi minyaka yonke beza ehhovisi lakho babheke ukuqhubeka kwakho.
Futhi lokho kukodwa kukusiza ukuthi uthi, lalela, ukuphi, ukuphi futhi wenzani. Baze bakubhalele iklayenti noma i-ejensi ethile incwadi ezokufakazela. Ngakho-ke ukuthuthukiswa kwebhizinisi kukodwa, okwami, kwenza le nto ibe ngaphezu komhlanganyeli ofanelekile enkundleni yezomnotho futhi ngibeke eceleni i-MBE ne-DBE eceleni futhi ngingachithi nesikhathi sami.
Ngiyethemba ukuthi lokhu kuyakusiza. Ngiyayithokozela noma iyiphi impendulo onayo, ngiyazi ukuthi ucabangani ngalokhu esikhuluma ngakho, i-co ntent yethu lapha futhi sizokubona ngokuzayo. Siyakwamukela.
Siyabonga ngokubuka. Manje usuyabona ukuthi kungani ngincamela ukwenza ibhizinisi ezingeni likahulumeni kunamazinga wombuso nawasendaweni. Kepha ngiqonde ukuthi, uma usafuna ukubheka izinhlelo zezwe nezendawo, kukhona izinsizakusebenza eziningi laphaya, sizobe sengeza amanye alawo manothi ekhasini lethu lamanothi wombukiso ngezansi ukuze uqhubeke Kepha uma unentshisekelo yokuthola umsebenzi wezithombe nami bese ubheka ngezansi futhi sinezixhumanisi namafayela nezinsizakusebenza ezingakusiza ungene kule makethe noma enkundleni yezemidlalo.
Sidinga ababhalisile abaningi. Sicela ubhalise.
Uma uthanda okuzwile, uma ufuna ukuqhubeka uthola lezi zihloko, ngicela ungazise futhi sizokubona ngokuzayo. Ngiyabonga. (umculo omnandi)
Yini ephakeme ukwedlula i-knighthood?
Yini i-I-Knighthood? Ngenkathi i-CBE ingeyesithathuokuphezulu kakhuluezigabeni ezinhlanu ze-oda, ababili kuphela abaphezulu abangasebenzisa isihloko esithi Sir (kowesilisa) noma uDame (kowesifazane). Owesibiliokuphezulu kakhuluIzinga yi-KBE noma i-DBE - uKnight noma uDame Commander we-Order of the British Empire.16 2019.
Ungazigqoka nini indondo yakho ye-MBE?
Itkufanelekufanele wazi ukuthi imihlobiso esemthethweni,izindondonoma izifanekiselokufanelegqoka kuphelauma ubanelungelo futhi bavunyelwe ukwamukelwa futhigqoka. Okungekho emthethweniizindondo kufaneleingagqokwa ngama-oda asemthethweni, imihlobiso futhiizindondo.25.11.2019
Ubani umuntu wakamuva ukwedlulwa?
U-Lewis Hamilton. Umpetha kasikhombisa weFormula One uLewis Hamilton wayekhonaknightedngoDisemba 30, 2020, njengengxenye yohlu lokuhlonishwa konyaka omusha weNdlovukazi u-Elizabeth II. Inhlonipho ibibangelwa yimpumelelo yakhe yomibili kanye nobushoshovu obumayelana nokunyakaza kweBlack Lives Matter.
Ingabe u-Ed Sheeran uyi-MBE?
umculi-umbhali wengomaU-Ed Sheeranwanikezwa i-MBEyiPrince of Wales ngomsebenzi wakhe womculo nomsebenzi wakhe wokupha.
Ukhethwa kanjani kwi-MBE?
Ukwenza i-ukuqokwa kwe-MBEUdinga ukutshela i-Honors and Appointments Secretariat konke mayelana ne-okhethiweumsebenzi nempumelelo kwisikhuluukuqokwaidokhumenti. Udinga futhi ukuhlinzeka okungenani ngezinhlamvu ezimbili ezisekelayo zakhoukuqokwayize singancoma phakathi kwezinhlamvu ezinhlanu nezili-15.
Ngubani othola i-MBE?
NGUBANI ONGAKWAZITHOLA MBE? Noma ngubani angaqokelwa ukuthola i-MBEinqobo nje uma behlangabezana nenqubo yokuhlonishwa yeNdlovukazi edingekayo. AnMBEUmklomelo unganikezwa ngazo zonke izinhlobo zempumelelo ehlukile, kepha uvame ukunikezwa ukuqaphela impumelelo yomphakathi noma insizakalo yendawo 'yokubamba izandla' eyenze isibonelo kwabanye.
Ngabe i-knighthood ithola umholo?
Awunayotholanoma iyiphi imali noma indondo. Kunama-oda ayisithupha weknighthoodnenkosi iyanquma ukuthi ungubaniknightedungene. Abanyeunayoiziqu ezahlukahlukene njenge-knight / dame cross enkulu noma umphathi we-knight / dame. Uyakwazi ukusebenzisa izimpawu ze-knighthood.
Uyini umehluko phakathi kwe-OBE, MBE ne-knighthood?
OBE - Isikhulu se-Order of the British Empire. UVivienne Westwood une-OBE. I-MBE - Ilungu le-Order of the British Empire. U-Adele une-MBE.
Yimuphi umklomelo omkhulu kunayo yonke i-MBE noma i-OBE?
Imiklomelo emithathu eyaziwa kakhulu imele izigaba ezahlukahlukene ku-Order of the British Empire. Isikhundla esiphakeme kakhulu nguMkhuzi we-Order of the British Empire (i-CBE), alandelwe yi-OBE (Officer) bese kuba yi-MBE (iLungu). Ngabe ama-MBEs, ama-OBE kanye nama-CBE akhishelwa ini?
Ingabe kukhona owesifazane olingana ne-knighthood?
Akukho okulingana nowesifazane ne-knighthood njengoba abesifazane beqokwa kumyalo we-chivalry. Abesifazane abaqokwe kwi-Most Noble Order of the Garter noma i-Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle banikezwa isihloko se-Lady instead of Dame - esisetshenziswa esikhundleni sesihloko sabesilisa esithi Sir. Ngabe ama-MBEs, ama-OBE kanye nama-CBE akhishwa ngani?